विन्टर डिप्रेसन ! किन हुन्छ ? कसरी बच्ने ?  Hamrosandesh.com
सामाजिक र जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या, अशान्ति वा मनले चिताएको काम पूरा नभएको अवस्थामा मानिसको दिमागमा असर पर्नसक्छ । मानसिक रोग सबै एकै प्रकारको हुँदैन । डिप्रेसन मानसिक रोगको एक प्रकार हो । र डिप्रेसनभित्र पनि धेरै प्रकार हुन्छ । त्यसमध्ये विन्टर डिप्रेसन एक हो । विन्टर डिप्रेसन विशेषगरी चिसो मौसममा हुनेगर्छ । गर्मी मौसममा विन्टर डिप्रेसन हुँदैन । यसलाई सिजनल डिप्रेसन भनिन्छ भने मेडिकल भाषामा एफेक्टिभ डिसअर्डर पनि भनिन्छ ।